New Year Resolution Quotes With Greetings | Goredzva Rakanaka 2021
Kufunga kwekuumba New Year Resolutions, kureva itsva gore resolution ine chirevo izvo zviri nyore. Zviri kungonamatira kwavari asi izvo zvakaoma. Chero ani anogona kunyora kumusoro runyorwa rwe ”Unofanira -Do's” uye “Unofanira Kuita” asi chaizvo, vangani vanogona kufamba hurukuro kana zvasvika pakutevera yedu zvisarudzo…Zvinotora simba rakawanda rekuda uye simba rakabatanidzwa pamwe nekutsunga kuzadzisa iyo 'rondedzero’ yezvisarudzo – pakupera kwezuva rega rega. Zvino heyo inouya nhau yakanaka yekuronga gore nyowani yekugadzirisa uye pragmatism inogona kukuona iwe kuburikidza nezvisarudzo zvako uye usati waziva iwe ungadai wakashandura shizha nyowani., zuva panguva -uya izvi Goredzva Rakanaka!
Tarisa uone gore Nyowani Kugadziriswa mazano
1. Ronga Rakareruka :
2. Usafananidza :
3. Iva zvauri :
5. Teerera kuMwoyo :
6. Chinokosha :
Gadza compact, zvinangwa zvinogoneka nyore kutanga nazvo. Kana iwe uchizviona iwe uchivaka iyo Eiffel Tower ine LEGO seti iwe yaunobatsira, zvinopera pasina kutaura kuti kuora mwoyo hakusi kure.
New Year Resolution Quotes Anonakidza 4
Iri izano rakajairika kana zvasvika kune Nyowani Gadziriso. Izvo zvinogona kushandira shamwari yako kana nharaunda zvingasashande zvinobudirira kwauri, izvo nekuda kwekuti iwe uri wakasarudzika munhu ane akasiyana zvachose magariro-epfungwa fomati. kufanana nechigunwe chimwe nechimwe chemunhu mupenyu chakasarudzika. Zvino Zvinokosha zvakakosha. Wako muvakidzani kana waunozivana anogona kunge achishandira akananga kune ichocho chinangwa kune chakasiyana chikonzero pamwe chete new gore resolution
Icho chokwadi kana iwe usina kuroora kana mune hukama, tanga nezvakanaka / kukurudzira iwe pachako. Tarisa mukati, dont tsvaga zvausina. Kufungidzira, zvibvunze mibvunzo yakati wandei senge – Ndiri kunyatsofara neni here ? (Iti hongu, zvese zvinoenderana nekufunga) Chii icho chandinogona kunatsiridza ? zvino chakakosha chinhu ndeche – Kuchengetedza nguva. Kunze kwekunge waisa parutivi chikamu chezuva iwe, saka zviri padhuze zvisingaite kuvaka anofara, mararamiro akanaka ! wana nguva yako wega. (zvisarudzo zvegore idzva)
New Year Resolution Quotes Anonakidza 1
4. Sanganisira zveMweya :
Kushungurudzika ndiko kwekare & mutsva uye wechokwadi muvengi isu tese tinofanirwa kusangana mune imwe avatar kana imwe mune edu ehupenyu mararamiro. Iko kune zvakadaro mushonga – inonzi Kufungisisa vamwe vangati mweya. Izvi hazvireve kuti zvinoreva kuburitsa mazana emadhora / rupees yeazvino Yoga Kirasi . Runako rwekufungisisa nderwekuti iwe unogona kudzidzira kunyangwe kumba, kana kunyangwe kubasa kwako. Kwete chete inopa kudzikama kune pfungwa, zvakare inobatsira mukuvandudza hutano hwako hwese.
Batanidzwa munharaunda yako yemunharaunda, shamwari kana kusangana nekambani yeCharity kana Isingaiti-purofiti iyo inoshumira vana, vakwegura kana kunyange mhuka – kana iwe uri munhu anoda zvisikwa. Shanyira ivo nguva dzose kana kamwechete pavhiki uye upe nguva yako pasina kuzvipira, iwe uchashamiswa nemusiyano waunoita. Pane zvakawanda zvakawanda zvinhu zvisingakwanise kutenga mari uye apa ndipo pauchazviwana! Govera hembe dzako dzekare, midziyo, mabhuku, zvishandiso nezvimwewo kuMasangano eRubatsiro, pane kuvarasa.
New Year Resolution Quotes Anonakidza 2
Bvisa nharembozha yako kazhinji uye ubudire panze pasina ivo kwechinguva zuva rega rega. Chinja kubva kune chairo nyika yeemail uye internet uye uti kwaziwai kune anotevera mukova muvakidzani panzvimbo. Basa rakakosha – asi kuchengetedza hupenyu pakati nepakati kwakanyanya kukosha! zvakare inogona kushandiswa idzva resolution resolution
Chero iyo iyo New gore zvisarudzo set, kungave kurasikirwa uremu kana kudzidza kana kugwinya, chengetedza kufambira mberi kwako uye usakanganwa kuzvipa mubairo pese paunozadzisa chinhanho. Kana iwe uchinzwa kuneta kana kuderedzwa pane dzimwe nguva, rangarira kuchengeta zvishoma posvo- iri mukuona iyo ine yakanaka imwe liners senge ”Unogona Kuzviita!” uye ” Ramba uchienda – unenge wavepo!”
Imwe yeakakura resolution yegore idzva yekudzora huremu
Zvese Zvakanakisa kune Nyowani Iwe Mugore Idzva rino!!!
New Year Resolution Quotes Anonakidza 3
“Chero zvazvave iwe unotya kuita, Zviite."
“Zvido zvinoita. Shinga kuita chishuwo. ”
― Lailah Gifty Akita, Funga Zvakakura: Iva Mukuru!
“Kwekuchinja, usawedzere zvinhu zvitsva muhupenyu hwako sekugadziriswa kwegore idzva. Pane kudaro, ita zvakawanda zvezviri kutokushandira uye rega kuita zvinhu zvinopedza nguva. "
“Vapfumi vacharamba vakapfuma here mugore idzva? Ko varombo vacharamba vari varombo muNew Year? Zvino nekuda kwamwari kuti pasi pano Gore Idzva richadaidzwa sei kuti idzva?”
“Gore idzva ndiyo nzira nyowani yekukoka shanduko, zvakawanda uye kubudirira kuupenyu hwese. ”
― Amit Ray, Rugare Rufaro Runako uye Chokwadi: Kurarama nePositivity
“Kunyangwe zvakamanikidzwa kana kukokwa, kuchinja hakudzivisiki. ”
inosetsa New Year Resolution Meme
Zvikamu Festivals Matagi Kugadziriswa kweGore Idzva, New Year Resolution greetings, New Year Resolution quotes Post navigation
Facebook Mapikicha Backgrounds HD
2 thoughts on “Kugadziriswa kweGore Idzva 2021”
Pingback: Goredzva Rakanaka 2020 Wishes Kwaziso - Goredzva Rakanaka
Pingback: Goredzva Rakanaka 2020 Kwaziso - Goredzva Rakanaka